Collectif pour le sport malgache (CSM): hatao any Bordeaux ny andiany voalohany | NewsMada
Collectif pour le sport malgache (CSM): hatao any Bordeaux ny andiany voalohany
Fantatra fa hotanterahina any Bordeaux, ny 11 ka hatramin’ny 13 avrily ho avy izao ny andiany voalohany amin’ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy kolontsaina ho an’ireo teratany malagasy monina any Eoropa sy ny manodidina ary hanasana ireo avy eto Madagasikara. Fihaonana karakarain’ny Collectif pour le sport malgache na ny (CSM). Na vao efa-bolana monja aza no nitsanganan’ny fikambanana, efa mahatratra 40 amin’izao fotoana izao ireo fikambanana miaraka aminy, milaza fa handray anjara, amin’ity andiany voalohany ity .
Tsiahivina fa amin’izao fanombohana izao, taranja sivy no hifaninana dia ny baolina kitra, ny baolina kitra lalaovina anaty efitrano «futsal», ny basikety, ny volley-ball, ho an’ny taranja iraisana ary ny lomano, ny tsipy kanetibe, ny tenisy ary ny haiady sy ny tenisy ambony latabatra kosa ny taranja ho an’olon-tokana.
Tsy tongatonga ho azy ny zava-nisy satria hihaona mivantana amin’ny masoivoho malagasy, any Frantsa, Rajonhson Rija, ny mpikarakara ao amin’ny CSM, ny 14 febroary ho avy izao. Hifanakalo hevitra mahakasika ity fihaonan’ny Malagasy any Eoropa sy ireo avy aty Madagasikara, ny votoatin’izany. Eo koa ny resaka hifanatrehana amin-dRamalalanirina Nicole, reny mpiahy ny Rencontre Nationale Sportive (RNS), tamin’ny taona 2014.